Evolutionka Isbedelay ee Telefishanka oo Sii Socda | Martech Zone
Maaddaama hababka xayeysiinta dhijitaalka ah ay sii kordhayaan oo ay u dhimanayaan, shirkadaha ayaa lacag badan geliya xayeysiinta telefishanka si ay u gaaraan daawadayaasha ku qaata saacadaha 22-36 daawashada TV-ga toddobaad kasta.
In kasta oo guuxa warshadaha xayeysiintu ay noo horseedi karto inaan aamino sannadihii la soo dhaafay iyadoo la tixraacayo hoos u dhaca telefishanka sidaan ognahay, xayeysiinta telefishanka waa halkii mid nool, oo wanaagsan, soona saareysa natiijooyin adag. Dhawaan Daraasadda MarketShare oo falanqeeyay waxqabadka xayeysiinta ee guud ahaan warshadaha iyo warbaahinta sida telefishanka, muujinta internetka, raadinta lacag bixinta, daabacaadda iyo xayeysiinta raadiyaha, MarketShare waxay ogaatay in TV-ga uu leeyahay waxtarka ugu sareeya ee lagu gaarayo tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah, ama KPIs, sida iibka iyo xisaabaadka cusub. Marka la isbarbardhigayo waxqabadka heerarka kharashka ee la midka ah, TV-ga celcelis ahaan afar jeer ayuu kor u kacay iibka dhijitaalka ah.
Xaqiiqdii, 2016 ayaa laga yaabaa inay noqoto mid ka mid ah sannadihii ugu faa'iidada badnaa abid ee loogu talagalay xayeysiinta TV-ga, iyada oo ay ugu mahadcelineyso qayb ka mid ah Super Bowl 50-oo dejisay marxaladda $ 4.8 million, 30-labaad oo ganacsi. Sida laga soo xigtay Da'da Xayeysiinta, wadarta kharashka xayeysiiska ee xayeysiinta Super Bowl laga soo bilaabo 1967 ilaa 2016 (oo lagu hagaajiyay sicir bararka) wuxuu ahaa $ 5.9 bilyan.
Super Bowl 50 saamiga lagu qiyaasay ee 2016 US network network telefishanka qarash gareynta wuxuu ahaa rikoor 2.4%, labanlaab ah heerka 2010 (1.2%), afar jeer heerka 1995 (0.6%), iyo lix jeer heerka 1990 (0.4%) ). Kulankii weynaa ayaa raacay raadadkii rubuc afaraad oo aad u xoog badan kharashka xayeysiiska TV-ga, taas oo, sida laga soo xigtay Tusmada Warbaahinta ee caadiga ah, wuxuu arkay guud ahaan qarash gareeya TVga 9 boqolkiiba dhamaadka 2015. Oktoobar 2015 waxaa lasiiyay bishii ugu fiicneyd ee xayaysiinta tan iyo bishii Janaayo 2014 - hadana hal tilmaame kale oo xayeysiinta TV-ga sii xoogeysanaya.
Si kastaba ha noqotee, ma dafiri karo in halkii uu ka dhici lahaa TV-ga, wadahadalka waa in la xakameeyaa in aan la kulanno isbeddellada joogtada ah ee TV-ga iyo daawadayaasha - sida ay tahay dabeecadda nolosha. Xitaa iyadoo shaashado badan oo kaladuwan iyo xulashooyin gaarsiin ah laga faa’iideysto, daawadayaashu wali waxay ku raaxaystaan ​​daawashada telefishanka-iyo xayeysiisyada la socda. Sida laga soo xigtay The Wall Street Journal's Haddii aad u maleyneyso in TV-ga uu dhintay, waxaa laga yaabaa inaad qiyaaseyso khalad, dadka qaangaarka ah ee da 'kasta ha ahaatee waxay waqti badan ku qaataan TV-ga marka loo eego barnaamijyada kale. Maqaalka oo tixraacaya cabbiraadda Nielsen, maqaalka ayaa tilmaamaya in dadka waaweyni ay ku qaataan 36 saacadood asbuucii daawashada TV-ga, halka ay ku qaataan illaa toddobo saacadood taleefannadooda casriga ah. Carruurta da'doodu tahay 18-34, ku dhowaad 22 saacadood ayaa lagu qaataa daawashada TV-ga halka 10 saacadood lagu qaato taleefannada casriga ah.
Markii la isku daro, tirooyinkan iyo xaqiiqooyinkan ayaa rinjiyeeynaya jawiga xayeysiinta TV-ga oo firfircoon, waxtar leh, oo si cad faa'iido u leh. Oo intii dhexdhexaad ahayd muddo dheer lagu aasaasay ahaansho qaali - sheegasho u korodhay sida xulashooyinka dhijitaalka ah ee raqiiska ah ay u galeen sawirka — waxaan aragnay soo noolaansho xoog leh oo xiisaha TVga noocyo badan oo xayeysiiyayaal ah. Markaa halka xayeysiisyada xayeysiiska ah iyo kuwa xayeysiinta ahi ay ka qaalisan yihiin marka hore abuuristooda iyo daabiciddooda, celceliska gujiska ah ee xayeysiisyada noocan oo kale ah ee dhammaan qaababyada iyo meelaynta ah ayaa weli ah boqolkiiba 0.06 aad u hooseeya Sidoo kale, 54% adeegsadayaashu ma riixaan xayeysiisyada banner maxaa yeelay iyagu kuma kalsoona, 18- illaa 34-jirrada ayaa aad ugu dhow inay iska indhatiraan xayeysiisyada internetka, sida boorarka iyo kuwa ku jira baraha bulshada iyo matoorada raadinta, marka la barbar dhigo TV-ga soo-jireenka ah, raadiyaha, iyo xayeysiimaha wargeysyada.
TV-ga oo ah dhexdhexaad dhaqameed wali muhiim ah. Markii aan wadno jadwal TV oo culus, waxaan aragnaa kor u qaadis xagga iibka iyo ka warqabka wax soo saarka ah. Waxaan u baahanahay inaan socodsiino labo asbuuc oo dhijitaal ah si aan u gaarno hal maalin oo warbaahin ah, Rich Lehrfeld, VP-suuq geyn caalami ah iyo isgaarsiinta American Express
Hadda, in kasta oo xayeysiinta TV-gu ay qabanayso shaqo weyn oo iskeed isu haysata, taasi macnaheedu maahan inaysan sifiican ula ciyaareynin kuwa kale, inbadan oo "hip" ah iyo qaabab xayeysiis casri ah waxaadna runtii u baahan tahay olole omni-channel ah inaad si buuxda u noqotid wax ku ool ah dhammaan barnaamijyada. Marka inta ay wali tahay ciyaar-yahanka loogu talagalay shirkadaha qaybaha kala duwan ee ganacsiga, TV-ga ayaa si fiican isu milmaya oo kor u qaadaya dadaallada xayeysiinta ee dhammaan marinnada kale sida fiidiyowga internetka, xayeysiinta barnaamijyada, bulshada, moobiilka, iyo wixii la mid ah.
Maaddaama ay tahay aaladda qalabka-agnostic, tusaale ahaan, TV-gu wuxuu xayeysiistayaasha fursad u siinayaa inay ka faa'iideystaan ​​waxyaabaha ugu sarreeya (ie, OTT waxaa loola jeedaa gudbinta maqalka, fiidiyowga, iyo warbaahinta kale ee internetka iyada oo aan lagu lug lahayn hawl-wadeenno badan oo nidaamka ka shaqeeya. xakamaynta ama qaybinta waxyaabaha) iyo fursado kale oo ay ku gaadhsiin karaan dhagaystayaashooda tobannaan goobood oo kaladuwan (tusaale ahaan, fiilada, shabakadda, iyo madaxbanaanida sida Netflix iyo Hulu)
Ololaha madaxweynaha ee hadda socda ayaa markhaati u ah awoodda telefishanka oo ah farriin iyo qaab gudbinta nuxurka. Sida laga soo xigtay Nielsen, dadka qaangaarka ah ee wax dooranaya waxay celcelis ahaan ku qaataan 447 daqiiqo maalintii daawashada TV-ga, 162 daqiiqo oo ay dhageystaan ​​raadiyaha, iyo kaliya 14 daqiiqo iyo 25 daqiiqo oo ay ku daawadaan fiidiyoowgooda iyo taleefannadooda (siday u kala horreeyaan).
Sida laga soo xigtay wargayska New York Times 'Derek Willis, waxba waxba kama badali doonaan telefishanka oo ah udub-dhexaadka istiraatiijiyadda warbaahinta ololaha doorashada ee 2016.
Dadka qaangaarka ah ee daawanaya telefishanka ayaa celcelis ahaan 7.5 saacadood maalintii ku qaata goobta horteeda saddexda bilood ee ugu horreeya ] aad uga badan waqtiga ay dadku ku qaataan kombuyuutarradooda gaarka ah, taleefannada gacanta, iyo kiniiniyada. Iyo dadka waayeelka ah ee Mareykanka - oo ka mid ah codbixiyaasha ugu kalsoonaanta badan - daawashada telefishin ka badan dhiggooda da 'yar. Maxay Taleefishinku Wali Boqorka Ugu yahay Ololaha Kharajka.
Ma dafiri karo in TV-ga uu wali yahay maalgashiga ugu wanaagsan ee xayeysiinta ah laakiin wali waxaad u baahan tahay inaad dhexgaliso olole ka socda barnaamijyada kale (shabakada, bulshada, mobilada, iwm.) - taasna waa sababta oo ah jawaabta marwalba toos ugama soo baxdo TV-ga - laakiin adoo adeegsanaya adag Analytics waxaad si fudud ku ogaan kartaa saameynta halo telefishanku wuxuu leeyahay ololaha oo dhan. Marka inta aaladuhu sii kordhayaan iyo deegaanka warbaahinta uu sii kordhayo, 36-kaas saacadood ee dadka waaweyni ku qaataan daawashada TV-ga usbuucii (iyo 22 saacadood ee millennials), been haka sheegin- sidoo kale soo noqoshada maalgashiga ee xayeysiiyayaashu sii wadaan inay ka goostaan ​​maalgashigooda xagga warbaahinta iyo hal-abuurka.
Tags: ad-kharash garayntaadageadweekexpress Maraykankawarbaahindariiq willishuluwadaagga suuqanetflixwaqtiyada cusub ee yorknielsenOctoberka badan waxyaabaha ugu sarreeyaiyo maddiibad supertelevisionxayaysiinta telefishankatvkharashka xayeysiiska tv-gatv ganacsi